DIINA UUMMATAA WALIIN TAA’ANII OLAANTUMMAA UUMMATAA MIRKANEESSUUN HIN DANDA’AMU! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
DIINQA OROMOO: Kutaa 16ffaa: Garbaabaa Guddisaa Ittisaa fi Beekan Gulummaa Irranaa Ebla, 2017. Qeerroo, ABO, WBO fi Diyaaspooraan Maali? Hidhaa kana keessa seenuun dhaggeeffadha!!
Kaleessa uummanni Oromoo jaarraa tokkoon dura abbaa biyyasaafi abbaa waansaa maraa ture. Biyyasaarratti abbaa biyyummaasaa kabajatee, aadaa, duudhaa, amantiifi eenyummaasaa qabatee wal waamee waliif awwaatee, dubbatee wal dhaga’ee waldhageessisee, rakkoorratti waliif birmatee, gadda irratti waliin hirmaatee, gammachuu waliin qooddatee garraamummaadhaan wal shakkii tokko malee ilma abaluu, warra gamaa warra gamanaa utuu waliin hin jedhiin baroota dheeraadhaaf waliin jiraachaa turuunsaa akka seenaatti yaadatama. Maaddii tokkoo waliin nyaatee, qodaa tokko keessaa unatee waliin dhugee akka seera mataasaatti safuufi aadaa mataasaatiin wal geggeessaa,wal bulchaa tureera. Ilmi oromtichaa intala oromtichaa gosa ilaallatee wal fuudhaa, wal kabajee waliin jiraachaa tureera. Tokkummaadhaan diina biyyaasaa saamuuf kallattii hedduun itti duulaa tures waliin itti duulee injifatee qe’eesaa eegee wal eegsisaa tureera. Ofiisaarra darbee ollaasaafi saboota biroof kabaja qabaachuurraa kan ka’e orma guddisee maqaas moggasaa ture. Hayyummaafi beekumsa mataasaatiinis sirna bulchiinsaa mataasaa qalaqatee, dhaha ykn kalaanderii mataasaa uummatee ittiin geggeeffamaa tureera.
Kanaanis qaroominni uummata oromoo adunyaa guutuu dinqisiisuurra darbee, kalaqniifi hayyummaan isaa addunyaa guutuutti gaaffii uumeera. Uummanni Oromoo hayyummaasaa kanaan addunyaadhaaf bu’uura qorannoofi kallattii kaa’ee darbuusaa seenaatu dubbata. Harra garuu inni jedhan hunduu hafee uummanni Oromoo sadarkaan addunyaa abjuu ta’ee, adda durummaa akka Afrikaatti qabaachuun hafee, biyya toophiyaa keessatti abba biyyaafi murteessaa ta’uun hafee, biyyasaa ganamaa ishee dhuunfaasaa kan taate Oromiyaa keeessatti utuu qabuu dhabee, utuu liqeessuu qabuu liqeeffatee, utuu ormatti hin dabiin itti dabamee, qabeenyasaa sadarkaa addunyaatti jijjiirama fiduu danda’u utuu qabuu ofii gad guddachaa, ofii hiyyumaan adabamaa orma duuromsaa, utuu qabuu harka ormaa ilaalaa, ofumaa kennee deebi’ee kadhachaa, maqaa xuraa’aa baatee maqaa gaarii orma badhaasaa jiraachuu erga jalqabee kunoo baroonni darbanii jaarraan tokko dhumee jaarra lammaffaan dabareesaa lakkaawwataa walakkaan ga’eera.
Ummanni oromoo harra waantota eenyummaasaafi aadaasaa mullisan fayyadamuun hafee, waan ormaa waliin didicha. Biyyumasaarratti keessummaa ta’ee, Afaansaa dubbachuuf qaana’ee dirqamaan afaan ormaa shaakalee waliin galaana garbummaa daakaa jiraata. Uummanni kaleessa waliin nyaatee waliin dhugee walitti gammadaa oolu harra mana walii lagatee harka walii lagatee, tokkummaa kaleessa cabeen amantiin walqoodee nyaataafi dhugaatii walii lagatee, Oromoon kaleessa gosa lakkaa’ee wal fuudhee walitti eerumu harra amantii lakkaa’ee wal fuudhuufi walitti eerumuutti jira. Oromoon kaleessa jilba lakkaa’ee gaa’ela ijaarratu harra safuu cabsee akka barbaadeen gaa’ela ijaarrataa jira. Waantoonni kunneen tooftaa kaleessa diinni ittiin nucabsedha. Harras tooftaawwan tokkummaa keenya diigan hedduun utuu uumamaa oolanii ofirratti baruu dadhabuun keenya gowwummaa guddaadha.
Oromoon harra abbaa biyyaa ta’uun hafee akka lammii sadaffaafi lammaffaattuu mirga argachuu qabu tokkollee utuu hin argatiin kadhattuu mana ormaa ta’ee biyyasaa ganamaa fi handhuura utubaasaarraa dhiibamee moggaa qabatee jireenya hamtuu dhamdhamaa jiraata.
Harra Oromoon aadaa bareedaafi boonsaa eenyummaafi qabeenyummaasaa calaqqisiisu dhabee kan ormaa achii dhufteesaafi ba’aaf galmasaa hin beekne bakka buufatee utuu irraa hin bareediin waliin rakkataa jiraata. Utuu sirni garboomfataa gara isaatti hin seeniin Oromoon, aadaa nyaataa, adaa uffannaa, aadaa wal kabajuufi safuu, aadaa fuudhaafi eerumaa mataasaa kan eenyummaasaan wal fakkaatu niqaba ture. Kaleessa mootummaan abbaa irree humnaan dadhabee malaan cabsee uummata oromoo seene, harras utuu humnaan hin xiqqaatiin oromoon tooftaa diinni illmaan isaa wayyaaneen bifa haaraan bixxilattee gara barbaaaddetti oofaa jirtu jala ba’uu dadhabee garbummaa bara dheeraa kana dhalootaa dhalootatti dabarsaa jira.
Kaleessa mootummaan garboomfataa tooftaa nama keenya namuma keenyaan bituutiin tokkummaa uummata keenyaa cabsee summii wal shakkuu kan keessa facaase, harras garboomfataan biraa tooftaa kana bifa anmayyaa’een hundeessee uummata keenya uummatuma keenyaan bituu itti fufeetuma jira. Kunis dhaaba maqaa uunmata oromoon dhaabbateen sossobee barra bittaasaa dheereffachuudha. OPDO.
Uummanni oromoo kaleessa waamee waliif awwaataa ture harra garuu shira walitti xaxuudhaan gaafa wal waamu gola keessa wal dhokachuutu dhufe. Utuu jiruu hinjiruutu dhufe. Nagaa wal gaafachuu lagachuutu dhufe. Abbaatu ilma ajjeesuutu dhufe. Obboleewwan wal waraananii aangoo diinaa wal harkatti qabuutu dhufe. Qe’ee abbaaf haadhasaa ormaaf qircee dhaalsisuutu dhufe. Kunis akka uummanni oromoo utuu qabuu dhabu, akka utuu kennuu kadhatu, akka ofii ala bulee keessummaa mana bulchu taasisee kunoo dargaggoonni, hayyoonni, ilmaan oromoo gariin biyyasaanii waan hundaan badhaate alagaaf soora taate lakkisee biyya hambaa keessatti kadhattuu ta’ee, galaanaafi bineensa biyya ormaan nyaatamaa jireenya dhiphinaa jiraataa gadadoo faarsaa baroota lakkaa’aa jiraata. Beektonni ilmaan oromoo gariin mana dararaa mootummaa wayyaanee keessatti gidiraa argaa gariin immoo saba isaanii ogummaasaaniin tajaajiluu utuu hin jibbiin biyya hambaa keessatti orma tajaajilaa jiraatu.
Kunis unumatu harkuma keenyaan ija keenya waraanee boossise malee utuu oromoo kaleessaa yaadannee yaadaafi kallattii tokko qabaanne umuriin garbummaa gabaabaa ture.
Harras mootummaan garboomfataa wayyaanee maqaa dimokiraasii jedhu dawoo godhatee uummata keenya jaalalaan akka horiitti wal arraabaa waliin ture gidduu seenuudhaan uummata keenya diigee gargar facaasuun ejjennoosaa jalqabaati. Uummanni oromoo utuu hin jaallatiin gargar faffaca’ee amantii adda addaa hordofaa, aadaa kansaa gatee kan ormaa kabajaa, jaalala eenyummaasaa dhiisee illalcha hammaataa waliif qabaachaa dhufuudhaan tokkummaan isaa daran diigamaa dhufuudhaan akka jireenya hawaasummaallee waliin hinjiraanne ta’eera. Kana gochuu keessattis shirri mootummaan wayyaanee gochaa jirtu laayyoo miti. Uummanni amantii garaagaraa qabu waliif kabajee bakka waliin jiraatutti gidduu seenuudhaan gaafii masgiida musiliimotaatti, gaafiimmoo mana amantaa kiristaanotaatti meeshaa waraanaa darbachuudhaan, warra kiristaanaatu isin gube, warra musiliimaatu isin gube jechaa uummata kewnya wal shakkisiisaa turuufi harrallee itti jiraachuun niyaadatama.
Kana malees, manneetii barnootaa olaanoo garagaraa keessatti barattoota walitti buusuudhaaf yaalii garagaraa gootee ittis milkaa’aa turteetti. Akkasumas uummata keenya kutaadhaan, lagaan qooduudhaan balaa gurguddaaf erga saaxiltee booda uummanni nagaan waliin jiraataa ture akka wal hin amanne gochuun gidduu galtee fayyadamummaashee milkeefataa turte; harras itti jirti. Mootummaaan wayyaanee uummata baroota hedduuf walkabajee daangaa walii eeggatee jiraataa ture gidduu seenuun walitti buuftee akka wal waraanan haalota mijeessitee nagaa uummataa jeeqaa turteetti; harras itti jirti. Kanaafis walitti bu’insa dhimma daangaa somaaleefi oromiyaa giddiitti ta’aa jiruun mootummaan wayyaanee gidduudhaan itti ho’isaa jiraachuunsaa ragaadha. Wayita uummanni shira ishee irratti baree waamee wal dhageessisee, iyyee waliif birmatee tokkummaadhaan dhaabii ishee dhorketti mootummaan wayyaanee shira haaraa uummachuudhaan garaagarummaa yaadaa nama keessatti uumtee bara bittaashee dheereffataa jirti. Kanaafis tooftaa OPDOn ittiin uummata burjaajjessaa jirtu kaasuun nidanda’ama. Uummanni tokkummaadhaan wal ijaaree diina miilla tokkoon dhaabe, harrammoo jechoota filatamoo laphee uummataa tuqan fayyadamuu OPDO dhaggeeffachuun yaada hiraa akka jiru argaa jirra. Sana dura dura garuu kaayyoo qabsoo uummata oromoo ganamaa ishee lubbuu kumaatamaan lakkaa’am galaafatte, lafee gootota kaleessa wareegamanii harras wareegamaa jiranii, dhiiga ilmaan oromoo kichuu daandii gubbaarratti dhangala’ee yaadachuun barbaachisaadha.
Tooftaan mootummaan wayyaanee nutti xaxxu kun kaleessas inuma jira. Garuu fayyadamummaan uummata oromoo bakka itti mirkanaa’e hin agarre. Harra uummanni keenya haasaa gowwoomsaa kana dhaga’ee warra qabsoo bilisummaa oromoof utuu lubbuu hin qusatiin diina dura dhaabbatee falmaa tureefi jiru; warra jireenya isaanii qabsoo bilisummaaf aarsaa godhee qabsaa’aa jirutti dachaanee arrabsaa, hamileesaanij buusaa, walirratti duulaa jirra. Kan itti duulamuu qabu garuu kan biraati. Tokkummaa keenyaan daran jajjabaannee galma yaadame ga’uu utuu qabnuu kutaalee xixiqqoo adda addaatti wal hiruun diina keenyaaf karaa saaqaa jirra. Qabsoon uummata keenyaa galma yaadame akka hin geenye kan taasises wal dhaga’uu utuu qabnuu yaada diinaaf gurraafi qalbii keenyadha.
Harra gaafa obboleessi rakkatu, gaafanni yaaddoo jireenyaa keessa galee dhiphatu, gaafanni diina manasaatti dhufe ofirraa deebisuuf wallaansoo walnqabu innimmoo cidha ormaa dhaqee maaddii diinaa soorachaa dhiichisa alagaa gargaara. Harka lafa jalaan obboleessasaatti malee diina gargaaree nagaa wal dhowwa. Tokko ta’ee diinatti duuluu utuu qabuu harra Oromoon kutaa kutaatti wal qoodee gamaafi gamanaan wal hiree, kaayyoo diinaa milkeessuurratti argama.
Kaayyoo kaleessa ilmaan oromoo qaqqaalii, hayyoonni utubaa biyyaa, shamaraafi dardarri, guddaafi xinnaan itti wareegame dagachaa ; diina ilmaan oromoo waliin hiriiruun walirratti duula banuun ammas dheebuun uummata ballaa akka dheebuu hin baaneefi hawwiin uummataa maseenee akka hafu gochuun baroota garbummaa dhedheeressuudha.
As irratti wanti ka’uu qabu;Diina ilmaan oromoo jalqabaa kan taate TPLF kaayyoonshee uummata kana bara dheeraa bituu akka ta’e namuu beeka. Kana gochuufis akka meeshaatti kan ishee gargaaru dhaaba maqaa oromoon socho’u OPDO fayyadamaa jirti. Dhaaba kana kan bixxile akka isheef ta’utti, fedhiishee akka guututti kan uume mootumaa diina orommoo wayyaaneedha. OPDOn yaadaa fi tarsiimoo mootummaa wayyaanee bakkaan ga’uuf akka hojjetaa jiran isaanuu dubbataniiru. Qabsoon uummata oromoo garuu caasaa mootummaa wayyaanee diiguudha. Harra garuu namoonni baayyeen kaayyoo qabsoo oromoo ganamaa dagachuun dhaaba kallattii qabsoo uummataa jijjiiruuf arraba qaratee afaan miyaa’ee afaaniin aantummaa uummataa faarsaa, fedhii uummataa ukkaamsaa, uummata keenya eenyummaasaaf, mirga abbaa biyyummaasaaf diina fuul dura dhugaa qabatee harka qullaa rasaasa diinaa fuuldura dhaabbatee falmaa hadhaawaa gochaa jiru ajjeesisaa jiru waliin dalga goranii kaayyoo wareegamtootaa galma malee hambisuuf yaaluun gowwummaa bara garbummaa bifa haaraan lubbuu itti horuuf dhufedha.
OPDOn qaama ykn ergamtuu mootummaa wayyaaneeti.
Mootummaan wayyaaneemmoo diina ilmaan oromooti. Harra opdon kallattii ilaalcha uummanni mootummaa wayyaaneerraa qabu jijjiiruuf tooftaa haaraa qabatee dhiyaachuusaa wallaaluun keenya, qalbii keenya qabsoo mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuufi sirna mootummaa wayyaanee diiguu ta’uu irraa kaafnee qaama mootummaa nama nyaataa wayyaanee kan taate OPDO waliin taanee diina keenyaaf harka dha’uun keenya komii seenaa keessa seenuudha. Nuti harra wanti beekuu qabnu, diina uummataa waliin ta’anii olaantummaa uummataa mikaneessuun akka hin danda’amne beeknee qabsoo bilisummaa jalqabame galmaan ga’uuf carraaquu malee sossobbaa diinaaf bitamuu akka hin qabnedha.
Qabsoo uummata oromootti wantoonni gufuu ta’anis:
Utuu beeknuu wallaallee diina keenyaaf beekamtii kennuudhaan beekumsa keenyatti bishaan naqnee harka ormaa ilaaluu, utuu qabnuu dhabaa taanee kanuma keenya ormaa laanee deebinee kajeeluu, dogoggora waliirraa wal sirreessinee wal ijaaruu utuu qabnuu qaawwa dogoggora keenyaa ballisuudhaan bakka qubannaa diinaaf qopheesauu, wallaalaa keenya gorfannee beekumsa gonfachiisuu utuu qabnuu; wallaala waliitti kolfinee bakka mudaa keenyaa diinatti agarsiisuu, dubbannee waliif dhageenyee waliin bakka yaanne ga’uu utuu dandeenyuu; wal dhaga’uu dhabuudhaan diinaaf ulaa banuu, tokkummaadhaan deemnee diina keenya injifachuu utuu dandeenyuu; sababoota xixiqqoodhaan yaadaan wal hirree walirratti kaanee diina of gidduu seensisuu, kaayyoo kaaneef dagannee gufuu xiqqoodhaan rukkutamnee of duuba deebi’uu, diinummaa diinaa hubachuu dadhabuudhaan diina waliin hiriirree hojii diinummaa hojjechuu, beekumsa keenya of keesaatti tufgannee wallaalaadhaan bitamuufi yaadasaan oofamuu, hireefi waan keenya wallaallee hiree alagaan nubituuf nuuf kenne tole jennee fudhachuufi kanneen kana fakkaataan hedduu kaasuun nidanda’ama.
Harra ilmaan oromoo bakka adda addaa taa’anii uummata oromoof qabsaa’an fedhii uummata biyya keessaa, fedhii uummata haala mijataa haga tokko qabaatee carraa magaallaaa jiraachuu argatee qofa utuu hin ta’iin, fedhii uummata keenya baadiyyaa oromiyaa keessatti tajaajila argachuu qabu tokkollee dhabee ishee qabu diina sooree jireenya gadadamaa jiraachaa jiruu giddu galeessa godhachuudhaan, fedhii qeerroon biyya keessaa harka diinaa jala jiraatee falmii hadhaawaa gochaa jiruu giddu galeeffachuudhaan kallattii qabsoo uummataa waliin sochootanii uummata keessaniif bu’aa qabatamaa tokko akka agarsiiftan; akkasumas, uummattoonni biyya keessaa qabsoo bilisummaatti jirtan shira diinaafi sossobbaa mootummaa garboomfataa kanaaf gurra kennuu baattanii kaayyoo qabsoo uummata oromoo ganamaa akkaa milkeessitan dhaamsa orommaan isiniif dhaama!
Dabalataanis maqaa dhaaba kabajamaa ABO tiin daldalauufi fakkeessitoota wayyaaneen bakka buufamanii biyya hambaa keessa jiranirrattis dammaquun gaariidha. Dhaaba guddaa Sabni Oromoo abdatuufi jaallatu ABO akka ta’e namni hunduu nibeeka. Haata’u malee nyaattuufi oftuultuuwwan maqaa qabsoon keessa teessee ana beekaa qofaan hojii dhibaa’ummaafi basaastummaa akkasumas hamiifi hamannaa geggeessitu amra dhaabichi akka qulqulleeffachuu qabu dhaamsa dabalataa jenna.
Dabalataanis, namoonni miidiyaa dawoo godhachuun dhaaba sabaaf hojjetu dhabamsiisuuf halkanii guyyaa hololan of eeggachuu qabu. Dhaaba Miliyoononni itti dhuman ABO namni kamuu akka jaallatuu; akka xuqamu akka hinbarbaanne namnuu beekuu qaba. Warreen maqaa Shaneefi sanaa kanaa moggaasuun dhaaba Oromoon jaallatu balaaleffattanis abidda quba kaa’uu keessan beektanii warri maqaa ‘aktivistutummaatiin’ oftuulummaan gaara geessanii jirtanis qilee keessa akka hinbuufamneef of eeggannoo guddaa taasisuu qabdan!